Scrap Metal Baler, Vetikal Non-Metal Baler, Metal Briquetting Press Machine - Unite Top
Hydraulic Scrap Metal Press Aluminium Baler Machine
Y81 Series hydraulic metal baler nwere mechiri emechi extruded Ọdịdị, elu-ike eyi efere na ụzọ ụzọ na ịkpụ pupụtara, nke nwere ike shiee nnukwu scraps ka nta nakwa dị ka ọbọ precompaction. Enwere ike ijikwa igwe ọ bụla aka ma ọ bụ na-akpaghị aka.
Usoro igwe ngwaọrụ nwere ike mmekọ
MERE gị nzọụkwụ ọ bụla nke ụzọ.
Site na ịhọrọ na ịhazi nri
Igwe maka ọrụ gị iji nyere gị aka ịkwado nzụta nke na - enweta uru ọ bụla.
Model No: Chinese rụpụta Automatic Control ...
Ihe karịrị 25 + afọ nke prod ...
Model No: Chinese rụpụta Q91Y Series Hydra ...
Model No: Chinese rụpụta Manual Control Q4 ...
Model No: Chinese rụpụta Manual Control Y8 ...
Model No: CBJ Series haịdrọlik scrap bale imebi ...
Model No: NY Series haịdrọlik na-ekpo ọkụ spinning closi ...
Jiangyin Unite Top Arọ Industry Co.Ltd. bụ a Chinese ụlọ ọrụ aku imewe na rụpụta nke metal imegharị ihe maka iji ígwè. e guzobere na 2004 ma gbasaa mmepụta mmepụta ma gaa na ogige ụlọ ọrụ mmepụta ihe na 2012. anyị nọ nso SHANGHAI, yana njem njem dị mfe. bụ ọkachamara emeputa nke haịdrọlik ígwè. Ka ọ dị ugbu a, ọ mepụtala usoro nkwakọ ngwaahịa ọla, ịkwa osisi, nkwakọ ngwaahịa ụgbọ ala, nchara nchara igwe na ihe ndị ọzọ. A na-arụpụta igwe eji emegharị ihe niile site na imewe iji mepụta ya dịka ụkpụrụ ntinye siri ike yana iji ndị na-eweta ngwaahịa siri ike ma tozuru oke.
Mkpa nke ịnọgide na-ebu hydraulic metal packer
Abali / 09/2021
Nọgide na-enwe usoro mmiri nke hydraulic metal baler bụ otu n'ime ihe ndị dị mkpa iji belata ntinye akụrụngwa na ụgwọ ọrụ nke isi ihe nhazi ebe a na-eweghachi ụdị ihe ọ bụla. Mee ezigbo oru nke igwe mgbawa nke igwe eji arụ ọrụ eletrik bụkwa otu n'ime ihe mbubata ...
Kedu ụdị ọrụ igwe na-akpacha ajị ígwè nwere?
Igwe na-akpacha ajị ígwè nwere ọtụtụ ngwa, arụmọrụ dị elu, arụmọrụ dị mfe, na ndozi dị mma. Enwere ike idozi ndị ọbịa n'ime ụlọ ma ọ bụ n'èzí. A na-eji igwe ịkwa osisi eme ihe site na iji usoro sayensị. Ihe mbu bu na ihe igwe na - achịkwa igwe ...
Chịkọta usoro ọrụ na nlezianya nke igwe achicha mgbawa
Shavings nke metal bụ ụdị ihe mkpofu ewepụtara mgbe nhazi nke ngwaahịa ma ọ bụ akụkụ ọla. Ọ bụ akụrụngwa maka imepụta nchara dị elu. Agbanyeghị, ọ dị mkpa ka igwe igwe na-acha igwe na-eme ka ọ sie ike. N'ihi na ọtụtụ ndị amaghị ọrụ ọrụ nke ndị ọrụ ...
Ọla kọpa Scrap Baler, Agụba Shear Maka Mobile Digger, Metal Powder Briquette Machine, Kwụ Baler Aluminium Scrap Press Machine, Hydraulic Baler / Aluminium Nwere Ike Press Machine, Mpempe akwụkwọ Metal Baler,